Zoba simahla nge-Adobe Photoshop Sketch app entsha | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Adobe namhlanje ibinosuku oluhle kwaye ilungisiwe usetyenziso ezimbini ezintsha Uyilo kwiVenkile yokuDlala kuGoogle. Ezinye ii -apps zeselfowuni ezisivumela ukuba sifikelele kwiseti elungileyo yezixhobo ukuze, emva koyilo, sikwazi ukuzidlulisela kwii-desktop zokusebenza apho sinokuthi ekugqibeleni sichaze umsebenzi.
I-Adobe Photoshop Sketch yinkqubo entsha ye-Android eyiyo zinikezelwe ukuzoba simahla Kwaye ayifani kangako ne-Photoshop desktop app, ubuncinci ngokwemigangatho yokuba sikwazi ukusebenzisa iibrashi ezahlukileyo kunye nokunye okungafaniyo, kuba sishiye okuninzi ukuba sibe namava afana nalawo eWindows okanye iMacOS.
Uya kuba noluhlu lweebrashi kunye neepensile, kwinto enokuba nayo i-watercolors kwii-acrylics, ii-inki iipelisi, iziphawuli zesiponji. Ngezi zixhobo uya kuba nakho ukwenza ubuchule bakho kwaye ubonise kwimivumbo embalwa ukuba iSketch yinkqubo ethandwayo kumanyathelo okuqala.
Unako ukufikelela ekudalweni kweefom ngendlela elula kakhulu, enokuguqulwa kwiindawo zokulawula njengenye insiza esungulwe namhlanje, iComp CC. Umaleko awunakuba ulahlekile kwi-app yale ndlela ukuze ukwazi ukwenza uyilo oluntsonkothileyo kwisitayile seFotohop kunye nezinye izinto zokusebenza kwiVenkile yokudlala ezinikezelwe kuyilo.
Lilonke uSketch une Izixhobo ezili-11 ke unokwenza zonke iintlobo zendalo, unokwenza iindidi ezingapheliyo zeebrashi usebenzisa iCapture CC, ukhethe ubhetyebhetye obukhulu ekucwangciseni izixhobo kunye nokukwazi ukuthumela imizobo eyenziwe kwiFotohop okanye kwi-Illustrator ngemigca yazo egciniweyo.
Uhlelo lokusebenza olunomdla kakhulu simahla Kwivenkile yeGoogle Play kwaye yenye yezicelo zeAdobe zokubonelela ngeseti elungileyo yezixhobo ezivela kwizixhobo eziphathwayo.
Khuphela iAdobe Photoshop Sketch
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Umzobo weAdobe Photoshop ngoku ufumaneka kwi-Android
Umonde Fuzzy sitsho
Indixelela ukuba ayihambelani nohlobo lwam lwe-Android (6.0 :)
Phendula kuPati Difusa
Zama i-APK: http://www.apkmirror.com/apk/adobe/adobe-photoshop-sketch/
Ndine-Android 6.0.1 (xperia Z5) kwaye ukuba indilungele.